Taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir & 9 qof oo kale oo ku dhintay dagaalladii maanta. [Akhris …] – Radio Daljir
Taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir & 9 qof oo kale oo ku dhintay dagaalladii maanta. [Akhris …]
Juunyo 17, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, June 17- Taliyihii ciidanka booliska dawladda KMG ee Soomaaliya ee gobolka Banaadir Cali Siciid Sh Xasan, ayaa ku geeriyooday dagaallada xooggan ee maanta ka dhacay gudaha magaalada kuwaasi oo u dhaxeeyey ciidanka dawladda iyo kuwa xooggaga is-bahaystay ee Al-shabaab iyo Xisbul islaam, waxaana sidoo kale dagaalkaasi ku dhintay ugu yaraan 10 qof halka in ka badan 50 kalana ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi.
Taliyaha ayaa la tilmaamay in uu ku geeriyooday goobta dagaalka kadib markii ay meel halis ah ka haleeshay rasaastu, waxaana warku uu intaasi ku darayaa goobtaasi in ay ahayd agga-gaarka tarabuunka, halkaasi oo sida wararku sheegayaan ay ka socdaan dagaallo culus oo la isku adeegsanayo hubka cul-culus iyo midka fududba.
Saraakiisha dawladda ayaa xaqiijiyey geerida taliyihii booliska gobolka Banaadir Cali Siciid Sh Xasan, waxaana dagaalladu ay gaysteen khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo soo kala gaaray labada dhinaca ee dirirtu u dhaxayso iyo dadka shacabka ahba, waxaana sida ay wararku tilmaamayaan ku bur-burtay hanti aad u tiro badan.
Dhinacyada dagaallamaya oo warbaahinta ka hadlay ayaa midkasta si gaar ah u sheegtay gacan sarraynta goobaha lagu dagaalamay, waxaana marba marka ka danbeeyey sii kordhaya tirada dhimasho iyo midda dhaawac ee ay dagaalladaasi sababeen inkastoo aan si rasmi ah loo caddayn karin inta ay le’egtahay, marka laga reebo tiro koob-kooban oo laga helay goobaha caafimaadka taasi oo muujinaysa 50 dhaawac ah iyo dhimasho 10 kale.
Dhaqaatiirta caafimaadka ee ka howl-gasha isbitaallada ku yaalla magaalada Muqdisho oo qaar ka mid ah ay la xiriirtay idaacadda Daljir, ayaa sheegay in illaa iyo hadda la soo gaarsiiyey in ka badan 50 qof oo qaba dhaawacyo kale duwan, kuwaasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen in aysan caddayn karin dadkaani inta ah kooxihii dagaallamayey iyo inta shacabka ah.
Dad ku sugan xaafadaha ay dagaalladu ka socdaan gaar ahaan kulliyaddii Jaalle Siyaad, oo ay xiriir xagga teleefonka ah la yeesheen wariyaasha Daljir ee magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyey in ay indhahooda ku arkayeen dad meyd ah oo yaallay meelo iska hor imaadadu ka dheceen, iyo waliba kuwo gaadiid lagu daabulayey.
Markasta oo dagaallo ay ka dhacaan Muqdisho waxaa ay galaaftaan nolosha dad aad u tiro badan, waxaana sidoo kale gaystaan dhaawacyo iyo barakac qoysas aad u fara badan.
Rabshadaha cusub ee hadda ka socda magaalad Muqdisho ayaa ku soo aadday xilli dhibaatooyin nolol xumo oo baahsani ay haysto kunaan qoys oo horay ugu barakacay dagaalladdii tobaadadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo kuwii ka sii horreeyey.
Idaacadda Daljir kala soco hadba wixii ka soo kordha dagaallada Muqdisho.